Izay rehetra tokony ho fantatrao alohan'ny hamoronana fampiharana | Vaovao IPhone
Androany isika dia handinika ny tontolo mahafinaritra na mampalahelo amin'ny maha-mpamorona amin'izao fotoana izao. Ity lahatsoratra ity dia mety handrisika anao na hanontany anao raha mendrika hanenjika anao izany., ny zavatra rehetra dia miankina amin'ny antenainao mialoha sy aorian'ny famakiana anay. Marina fa tsindraindray ny fampiharana dia mahatratra ny stardom viral toa an'i Flappy Bird, na izany aza, ny hafa manana counter download hatramin'ny zero, fa ahoana ny any afovoany?
Hanomboka amin'ny Jared saina, mpamorona ny mpamaky RSS "Tsy mbola novakina", Sinclair nanapa-kevitra tamin'ny taon-dasa mba hamoaka amin'ny bilaoginy ny vola azony miaraka amin'ilay fangatahana ary koa ny zavatra niainany izay azony mandritra ny fizotrany, miaraka amin'ny fisondrotany sy ny fidiny, ho torolàlana kely ho an'ireo mpamorona ho avy.
Fepetra tsy mahazatra io, angamba somary fihatsarambelatsihy, satria mazàna ireo mpamorona no mahomby amin'ny fampiharana azy ireo no manapa-kevitra ny hanao an'io karazan-tahiry io ampahibemaso, mazava ho azy fa tsy misy olona manolotra autobiografia antsika miaraka amin'ny isa mahamenatra, fa mijery ny lafiny tsara dia hananantsika izany mpandrindra mahomby dia afaka mitarika antsika.
1 Handeha isika
2 Vita ve ny asa?
3 Izay miditra amin'ny zavatra mivoaka
Sinclair, avy amin'ny tanan'ny Unread dia nahatratra $ 10.000 tao anatin'ny 24 ora voalohany, saingy enim-bolana taty aoriana dia nitentina 32.000 $ fotsiny izy ireo (izay hampiarahanay $ 10.000 ho an'ny kinova iPad). Inona no mitarika antsika mankany Lesona voalohany, ny ankamaroan'ny fampiharana dia nahatratra ny varotra tampony tao anatin'ny andro taorian'ny nanombohany.
Aza atomboka amin'ny vidiny mihena ny tolotra nataonao ho tolotra, mety mila izany ianao any aoriana hanintonana mpampiasa indray
Raha ny fampiharana podcast an'ny "Overcast" an'ny developer Marco Arment, averin'ny graf.
Na izany aza, zava-misy lozika io, fa tsy fahamarinana tanteraka. Misy andian-javatra maromaro izay afaka mamaritra ny tampon'ny varotra sy ny tombom-barotra, tsy ny zava-drehetra no ho vidin'ity fiainana ity. Ao amin'ny sary etsy ambany amin'ny lalao fitsangatsanganana ankafizin'i Dan Gray «tsangambato Valley“Hitanay fa ny hetsika toa ny Apple Design Awards na ny varotra fahavaratra fahavaratra ao amin'ny AppStore dia nitombo ny tampon'ny varotra. Betsaka kokoa no nanampy ny fanavaozana faharoa ny "Forgotten Shores" na ny tolotra Krismasy, izay manohina ny tampon'ny varotra fanombohana. Averina indray, mandeha ny fampidinana ambany.
Na eo aza izany, ny varotra fandefasana dia mbola manan-danja indrindra raha ny fametrahana ny rindranasa sy ny fanaovana tombony miaraka aminy, araka ny nomarihin'i Sinclair.
Na izany aza, mbola tsy mifanatrika isika "Ny gisa mametraka atody volamena" avy amin'ireo mpamoronaMino i Sinclair fa mbola misy zava-dehibe kokoa ihany, ry bilaogera.
Ny fandrakofana ny bilaogera manam-pahefana dia afaka mitarika fivarotana betsaka lavitra noho ny fampiroboroboana ao amin'ny AppStore
Vita ve ny asa?
Tsy misy zavatra hafa avy amin'ny zava-misy, Raha te-hahazo vola tena izy amin'ny fampiharana anao ianao ary mieritreritra fa ny fanoratana ilay kaody miaraka amin'ny hevitra tsara sy ny fitsofana azy no hany ilainao, dia diso be ianao. Kapeli, mpamorona ny «DashNy rindrambaiko izay nanangona $ 270.000 XNUMX teo ho eo tamin'ny taon-dasa dia manome sary manintona momba ny ora ora takiana mba hanatanterahana ny fampandrosoana sy ny fikojakojana ny fampiharana. Na dia mahita fotoam-piasana mafy aza izahay ary misy hafa miala sasatra be, dia hitantsika fa tsy mitombina io, ka tokony ho vonona hiatrika karazana toe-javatra isika.
Izay miditra amin'ny zavatra mivoaka
Ny fandaniana dia singa iray tokony hijerena ny fampitahana, arakaraka ny maha lehibe ny fahombiazana no avo kokoa ny fandaniana, nefa tsy midika izany satria fampiharana tsotra na asa tena izany dia manome toky fa tsy andoavam-bola. Monument Valley, miaraka amin'ireo mpiasa eo amin'ny valo eo ho eo, ary dimy amby valopolo herinandro ny asa eo anelanelan'ny fanontana roa dia nahazoana vola 1,4 tapitrisa dolara. Mihabetsaka indrindra raha toa ka izay anananao no hevitra ho an'ny fampiharana fa tsy ny fahaiza-manao amin'ny fampandrosoana.
Amin'ity tranga farany ity dia manana ohatra ny Brian Conklin, ny mpanentana «Robot SiK«, Iza no nifanehatra tamin'ny mpandraharaha nangataka $ 50.000 12.000 teo ho eo hanatanterahana ilay tetikasa ary efa nandany $ XNUMX mahery tamin'ny fivoarany teo am-baravaran'ny famoahana azy, atahorana mafy. Tsia?
Ny torohevitra omen'i Conklin antsika hampihenana ny vidiny dia mirakitra ny lisitry ny takiana na miroborobo, hatramin'ny kely indrindra mba hahatonga ny fampiharana ho manintona fa tsy manipy ilay hevitra voalohany any anaty labo, satria raha mahazo ny lazany ny fampiharana dia azo ampiana amin'ny endrika fanavaozana ireo fiasa ireo, izay mety hanohy hisarika ny mpividy ihany koa.
Voatarika sa diso fanantenana rehefa avy namaky anay? Avelako anao ny teny farany iray avy amin'ny guru iray izay mety hahatonga anao handray izany fanapahan-kevitra izany.
Resy lahatra aho fa ny antsasaky ny manasaraka ireo mpandraharaha mahomby sy ireo tsy mahomby dia ny fikirizana - Steve Jobs
Ny fampiharana dia tsy misy intsony ao amin'ny App Store Ny fampiharana dia tsy misy intsony ao amin'ny App Store Ny fampiharana dia tsy misy intsony ao amin'ny App Store Ny fampiharana dia tsy misy intsony ao amin'ny App Store
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Izay rehetra tokony ho fantatrao alohan'ny hamoronana fampiharana
Emma dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara, asa tsara…
Avy amin'ny admin Yowhatsapp apk.
Valiny tamin'i Emma
PlayBox mamela anao hijery sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika amin'ny fitaovanao tsy misy Jailbreak
Gold-East MS937 no klone iPhone 6 tsara indrindra amin'ny $ 115 fotsiny